Uncategorized Archives - KBZ Bank
ATM ကတ်ဖြင့် KBZ Mobile Banking အကောင့် လျှောက်ထားပြီး ဆုကြေးငွေများ ရယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေး အစီအစဉ်၏ မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ
ATM Self-registration Campaign က ဘယ်အချိန်အတွင်း အကျုံးဝင်တာလဲ။
၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့မှ မေလ ၃၁ ရက်အတွင်း အကျုံးဝင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ATM Self-registration Campaign မှာ ဘယ်သူတွေ ပါဝင်ခွင့်ရှိမလဲ။
မေလအတွင်း ATM Self-registration မှတဆင့် KBZ Mobile Banking account လျှောက်ထားသူအားလုံး ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ATM Self-registration က ဘယ်လို Campaign မျိုးလဲ။
မေလအတွင်း ATM Self-registration မှတဆင့် KBZ Mobile Banking account လျှောက်ထားသူများထဲမှ ကံထူးရှင်များအား ရွေးချယ်၍ ဆုငွေ ၅၀၀ကျပ်မှစတင်ပြီး ကျပ်တစ်သိန်းထိ ဆုငွေများ ချီးမြှင့်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မေလအတွင်း ATM Self-registration မှတဆင့် KBZ Mobile Banking account လျှောက်ထားသော customer များအနက်မှ ကံထူးသူများကို ကျပန်းအနေနှင့် ရွေးချယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကယ်၍ ဆုငွေများ ကံထူးခဲ့ပါက ဘယ်အချိန်မှာ ဆုငွေတွေ ရရှိမှာလဲ။
Campaign ကာလပြီးသည့်နောက် ၁ပတ်အတွင်း(ဇွန်လ ပထမပတ်အတွင်း) ဆုငွေများကို မိမိဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်အတွင်းသို့ ထည့်သွင်းပေးသွားပါမည်။
ဇွန်လ ပထမပတ်အတွင်း ဆုငွေရရှိသူစာရင်းအား KBZ Bank Viber Community Channel နှင့်နှင့် KBZ Bank Website တွင် ကြေငြာပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဆုငွေဖြည့်သွင်းပြီးပါက SMS မှတဆင့် အကြောင်းကြားပေးသွားပါမည်။ မိမိဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ဆုငွေရရှိခြင်းရှိ၊ မရှိ Mobile Banking app ရှိ Account History တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
May 2, 2022May 2, 2022 In Uncategorized
ATM ကတ်ဖြင့် KBZ Mobile Banking အကောင့် လျှောက်ထားပြီး ဆုကြေးငွေများ ရယူနိုင်မည့် အခွင့်အရေး အစီစဉ်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
KBZ Mobile Banking ATM Self-registration Campaign သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။
၁။ Ria၊ Thunes နှင့် Tranglo ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုနေသည့် ကမ္ဘောဇဘဏ် customer များအတွက် မဟာသင်္ကြန်ကာလ အထူးအစီအစဉ်သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ဖြစ်ပါသည်။ ၂။ မဟာသင်္ကြန်ကာလ အထူးအစီအစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ RIA၊ Thunes နှင့် Tranglo ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု သုံးစွဲသူကမ္ဘောဇဘဏ်customerများအတွက် ကျေးဇူးတုံ့ပြန်သောအားဖြင့် ပြည်ပမှ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်သို့ ငွေလွှဲလျှင် ငွေလွှဲခ အခမဲ့ဖြင့် တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။ ၃။ ဤအစီအစဉ်၌ API MTOs Inwards မှ ငွေလွှဲများ အားလုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။ ၄။ Ria၊ Thunes နှင့် Tranglo ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုကွန်ရက်ရှိသော မည်သည့်နိုင်ငံမှမဆို လွှဲပို့လိုက်သော...
April 6, 2022April 7, 2022 In Uncategorized
မဟာသင်္ကြန်ကာလ အထူးအစီအစဉ် – မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ
ယခုပြုလုပ်သော အစီအစဉ်၏အမည် နှင့် မည်သည့်customer များ ပါဝင်နိုင်ပါသလဲ။
ယခုပြုလုပ်သောအစီအစဉ်၏အမည်မှာ ငွေလွှဲခ အခမဲ့ မဟာသင်္ကြန်ကာလ အထူးအစီအစဉ် ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘောဇဘဏ် နှင့် ၎င်း၏ မိတ်ဖက်ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော Ria၊ Thunes နှင့် Tranglo တို့ကို အသုံးပြုသော customer များအတွက် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလွှဲခအခမဲ့ မဟာသင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ်က ဘယ်လိုအစီအစဉ်မျိုးဖြစ်ပါသလဲ ။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှ customer များအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မိသားစု၊ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို ငွေလွှဲရာတွင် ငွေလွှဲခအခမဲ့ (၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအခမဲ့ဖြင်) လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်မည့် “ငွေလွှဲခအခမဲ့” မဟာသင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။
ငွေလွှဲခအခမဲ့ မဟာသင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ်ကို စတင်မည့်အချိန် နှင့် ကြာမြင့်မည့်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါသလဲ။
ငွေလွှဲခအခမဲ့ မဟာသင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ်ကို ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ ၂ ပတ်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါသည်။
ငွေလွှဲခအခမဲ့ မဟာသင်္ကြန်အထူးအစီအစဉ်တွင် မည့်သည့် ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါသလဲ။
ဤအအစီအစဉ်၌ Ria၊ Thunes နှင့် Tranglo တို့မှ ငွေလွှဲများသာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
ဤအစီအစဉ်မှာ customer အတွက် ဘာအခွင့်အရေးတွေ ရနိုင်ပါသလဲ။
ပြည်ပမှ ငွေလွှဲသူများအတွက် ငွေလွှဲခ အခမဲ့ဖြင့် မြန်မာပြည်ရှိ ကမ္ဘောဇဘဏ်အကောင့်သို့ တိုက်ရိုက် ငွေလွှဲနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
April 4, 2022April 4, 2022 In Uncategorized
၁၀ သိန်းကျပ်ကံထူးနိုင်မဲ့ CASH ACCOUNT LUCKY DRAW CAMPAIGN – မေးလေ့မေးထရှိသော မေးခွန်းများ
သတိပြုရန်။ ကမ္ဘောဇဘဏ်သည် ယခု အစီအစဉ် ​၏ တစိတ်တဒေသဖြစ်သည့် Customer တို့​၏ အကောင့်အချက်အလက်များ ၊ OTP သို့မဟုတ် စကားဝှက်များ ကို Customers များထံမှကို မည်သည့်အခါမျှ ဖုန်းဆက်ခေါ်ယူ မေးမြန်းမည်မဟုတ်ပါ။ ထိုကဲ့သို့ သော သတင်းအချက်အလက်များကို တစ်စုံတစ်ယောက် မှ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းလာပြီဆိုပါက ထိုသူတို့​၏ မေးခွန်းများကို ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမပြုခြင်းဖြင့် လိမ်လည်မှုများကို ရှောင်ရှားပါ။
March 21, 2022March 21, 2022 In Uncategorized
၁၀ သိန်းကျပ်ကံထူးနိုင်မယ့် CASH ACCOUNT LUCKY DRAW CAMPAIGN ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
၁။ ကမ္ဘောဇဘဏ်​၏ Cash Account Lucky Draw Campaign ကာလ သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ထိဖြစ်ပါသည်။ ၂။ ကမ္ဘောဇဘဏ်​၏ Cash Account Lucky Draw Campaign ​၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဤ Campaign ကာလအတွင်း Cash Account အသစ်ဖွင့်သည့် Customer များနှင့်Cash Account ရှိပြီးသား Customer များအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ အကောင့်ထဲသို့ ငွေသားထပ်မံထည့်သွင်းအပ်နှံကြရင်း ကံစမ်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ၃။ တစ်ဦးချင်း Cash Account ကို ဖြစ်စေ Corporate Cash Account ကို...
March 21, 2022April 6, 2022 In Uncategorized
မြန်မာသင်္ဘောသားများ လစာထုတ်ယူနိုင်သော ဘဏ်ခွဲများစာရင်း
ရွှေဂုံတိုင်အမှတ်(၂၁၂/က)၊ အခန်း(၁၀၁/၁၀၂)၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမကြီး (အလယ်)၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ဗိုလ်တစ်ထောင်အမှတ်(၁၇၈)၊ ဗိုလ်အောင်ကျော်လမ်း၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ကျွန်းတောလမ်းတိုက်(၁)၊ Junction Square၊ ကျွန်းတောလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ကျောက်တံတားအမှတ်(၃၃/၄၉)၊ ဘဏ်လမ်းနှင့် မဟာဗန္ဓုလမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
IBD (SOC)အမှတ်(၅၃)၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းထောင့်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ - ၂အမှတ်(၁၃၀)၊ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း၊ (၉)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
ဦးဝိစာရ - ၂အမှတ်(၃၅၅)၊ ဦးဝိစာရလမ်း၊ မြေနီကုန်း(မြောက်)ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်
March 3, 2022March 3, 2022 In Uncategorized
ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ VIP customer များအတွက် ဝန်ဆောင်ခများ
ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ VIP customer များအတွက် ၂၀၂၂ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့မှစ၍ သတ်မှတ်လိုက်သော ဝန်ဆောင်ခ နှင့် အဖိုးအခများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လူကြီးမင်း၏ ဘဏ်နဲ့ပက်သက်တဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးအတွက် ကမ္ဘောဇဘဏ်၏ ဦးစားပေး Hotline နံပါတ် 8666 (သို့) 09969508666 မှတစ်ဆင့် VRA သို့ခေါ်ဆိုကာ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ VIP Customers – Schedule of Charges
January 3, 2022January 13, 2022 In Uncategorized
Visa ကတ်သက်တမ်းတိုးရာတွင်လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ
ဤနေရာတွင် ထည့်သွင်းထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့မှ သင့်ကို အခါအားလျော်စွာ ထုတ်ပေးနိုင်သည့်ကတ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ သင့်အနေဖြင့် ဤစည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းအားလုံးကို ဖတ်ရှုနားလည်လက်ခံ ပြီး အချိန်တိုင်း လိုက်နာပါရန် သင်ကသဘောတူပါသည်။ (၁) သင်၏ကတ်လျှောက်ထားမှုကို ကျွန်ုပ်တို့သဘောတူပြီးနောက် သင့်အားထုတ်ပေးထားသော ကတ်နှင့် PIN တို့အား သင့်အနေဖြင့် လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းထားရပါမည်။ ၎င်းကတ်နှင့်ပတ်သက်၍ အသုံးပြုထားသောကိစ္စရပ်များအားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင်တာဝန်မရှိစေရ။ (၂) ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) အခိုးခံရခြင်း (သို့) PINပေါက်ကြားခြင်းတို့ဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်း အကြောင်းကြား ရပါမည်။ အကြောင်း ကြားချက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမရရှိမှီ တစ်ဦးဦးက သင့်ကတ်ကို အသုံးပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းအားလုံး အတွက် သင့်အနေဖြင့် တာဝန်ယူရ ပါမည်။ (၃) သင်၏ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း (သို့) ကတ်ခိုးယူခံရခြင်း (သို့) ကတ်ပျက်စီးခြင်း (သို့)...
December 29, 2021December 29, 2021 In Uncategorized
Western Union Inbound Remittance ၏ အထူးဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်သော ဘဏ်ခွဲများစာရင်း
Yangon RegionMandalay RegionOther Regions
Mingalarzay-1BLD.(1), ROOM NO.(01-03), GROUND FL, ROOM NO.(05), (1ST) FL, SET YONE ST,,MINGALAR TAUNG NYUNT TSP, YANGON DIVISION
LanmadawNO.(B), ROOM NO.(01-06/ 01-07), LANMADAW CONDO,,LATHA TSP, YANGON.
KAMAYUTNO.(615/1), PYAY RD,,KAMAYUT TSP, YANGON.
MYAYNIGONENO.(272), DANAHLAING TOWER, PYAY RD,,MYAYNIGONE (NORTH-HTA) QTR, SANCHAUNG TSP,YANGON.
Shwebonthar-1NO.(316/324), SHWE BON THAR ST,,PABEDAN TSP, YANGON.
HlaingNO.(41), BANYINTNAUNG MAIN RD,,AYE YEIK MON HOUSING, HLAING TSP, YANGON.
HLAING THAR YARNO.(1946), AH SINT MYINT ST,, (6) QTR, INDUSTRIAL ZONE (2), HLAING THAR YAR TSP, YANGON.
SOUTH DAGONNO.(13), CORNER OF PYIHTAUNGSU MAIN RD & MYA SAPAL RD,, (24) QTR, NEAR SOUTH DAGON INDUSTRIAL ZONE, SOUTH DAGON TSP, YANGON.
NORTH OKKALAPANO.(315), GAGYI QTR, THUDAMAR RD,,NORTH OKKALAPA TSP, YANGON.
TAMWEBLD.(24), U CHIT MG HOUSING, U CHIT MG RD,,TAMWE TSP, YANGON.
KyiMyinDineNO.(578), LOWER KYIMYINDAING RD,,PAN HLAING QTR, KYIMYINDAING TSP, YANGON.
Thuwunna-1BLD.(5), (4TH-LEFT) FL, (24) QTR, THUWANNA HOUSING, THAN THU MAR MAIN RD,,THINGANGYUN TSP, YANGON.
SAWBWARGYIGONENO.(86/87), LAN THIT ST, NANT TAR GONE QTR, SAWBWARGYIGONE, ,INSEIN TSP, YANGON.
THAMINENO.(6/D-2), KYEIK WAING PAGODA RD, THAMINE QTR, ,MAYANGONE TSP, YANGON.
HLEDANNO.(2/C), YGN-ISN MAIN RD, (9) QTR, ,HLAING TSP, YANGON.
Thingakyun-2BLD.(2,3,4), (SH-B1), YADANAR ST, 14/ BAWAMYINT QTR, MALIKHA HOUSING, ,THINGANGYUN TSP, YANGON.
Insein-pork Taw WaNO.(548), BAYINTNAUNG MAIN RD, PAUK TAW QTR, ,INSEIN TSP, YANGON.
Bayintnaung-2NO.(313) CORNER OF KYANSITTTHA RD & 11 ST, (1ST) QTR,,MAYANGONE TSP,YANGON.
KanTawKalayNO.(1/2), BLD.(A,B,C), SHWE MYA YAR HOUSING, MYA THAR GONE ST, ,MINGALAR TAUNG NYUNT TSP, YANGON.
Sin Ma LiteBLD.(A), GROUND FL, 1 ST,6QTR, HIWAY COMPLEX PROJECT,,KAMAYUT TSP, YANGON.
Sanchaung-BargayarBLD.(129), ROOM NO.(B-003,011,012), CORNER OF BARGAYAR RD & SHWE PYI AYE ST, ,SANCHAUNG TSP, YANGON.
North Dagon-1NO.(36), PINLON RD, 32 QTR, ,DAGON (NORTHERN) TSP, YANGON.
Lanmadaw 4STBLD.(312/318,A), ROOM NO.(003,0004,103,104), CORNER OD ,ANAWRAHTA RD &4ST,
1 QTR, GREAT WALL CONDO,LANMADAW TSP, YANGON
SawBwarGyiKone-2NO.140 (1,2), BLD C,CORNER OF KHINESHWEWAR AND NILAR ST,, SWARPWARGYIGONE PWAEYONE BUS STATION, INSEIN TSP, YANGON DIVISION
NaungpinlayzayNO.(48) , LANMADAW STREET, 1 QTR, LATHA TSP, YANGON DIVISION,
Bayintnaung-3NO (SA-46) AB, SEINPAN STREET, 1 QTR, BAYINTNAUNG BROKER'S ,
SALE CENTER COMPOUND, MAYANGONE TSP, YANGON DIVISION
Merchant StreetNO.(537-539), GROUND FLOOR, CORNER OF MERCHANT ROAD AND,PANSODAN STR,
KYAUKTADA TSP, YANGON DIVISION,
PansodanNO.181/187, RM (B/C), MEI BUSSINESS TOWER, MIDDLE PANSODAN STREET, KYAUKTADA TSP, YANGON DIVISION,
Botahtaung-2NO 182/194, BOTAHTAUNG PAGODA ROAD,,HNINSI CONDO, 1 QTR, PAZUNDAUNG TSP, YANGON DIVISION
WayzayantarNO.280/281, WAYZAYARNATAR ROAD,,6TH QUARTER, SOUHT OKKALAPA TSP, YANGON DIVISION
Kyaut Myaung ZayNO(206), KYIKEKASAN ROAD, KYAR KWET THIT QTR,,TAMWE TSP, YANGON DIVISION
Bo Myat Tun StreetNO.(198-191), BO MYAT TUN ROAD,9 QTR, MIDDLE BLOCK, BOTAHTAUNG TSP, YANGON DIVISION
Inyar RoadNO. (4R/2B), CORNER OF INYAR ROAD AND BAWDI YEIK THAR ST,,2 QTR, BAHAN TSP, YANGON DIVISION
Thein Phyu StNO.(484),THEIN PHYU STREET,,MINGALAR TAUNG NYUNT TOWNSHIP,YANGON
PARAMINO.39, PARAMI ROAD,8 QTR, YANKIN TSP, YANGON DIVISION
South Okkalapa-2N0.151-3, THUMINGALAR ST,,12TH QTR, SOUTH OKKALAPA TSP, YANGON DIVISON
YGN73-NINE MILESNO(147), AIRPORT VIEW TOWER B ,PYAY ROAD,,(5)QTR,9MILE, MAYANGONE TSP, YANGON DIVISION
Min Ye Kyaw Swar St (YGN-74)BLD (A1), MINYEKYAWSWAR ROAD, MYKS ECONOMIC BLD PROJECT, ,
LANMADAW TSP, YANGON DIVISION
Pan Pin Gyi (YGN-75)NO.(29), PANNPINKYI ST, MAKYITAN NORTH-EAST,,QTR, KYI MYINT TAING TSP, YANGON DIVISION
Shwe Tharaphi Avenue (YGN-76)NO(38), SHWE THAYAPHI AVENUE, BAYINTNAUNG ROAD,,KAMAYUT TSP, YANGON DIVISION
Aung San Stadium (YGN-77)BLD. 20/22, ROOM-2,3,4, GROUND FLOOR, CORNER OF GYOPHYU ST AND ALANPYA PAGODA ST,,7 [...]
December 14, 2021December 14, 2021 In Uncategorized